Sirta si fiican loo ilaaliyo: sida ku xusan kitaabka Bilowgii, Aadan iyo Xaawo waxaa laga saaray jannada maxaa yeelay waxay cuneen tufaax, ilaa maalintaas naxdinta leh, adiga iyo anigu waxaan ku dhaaraneynaa ciqaab
Sirta si fiican loo ilaaliyo: sida ku xusan kitaabka Bilowgii, Aadan iyo Xaawo waxaa laga saaray jannada maxaa yeelay waxay cuneen tufaax, ilaa maalintaas naxdinta laheyd, adiga iyo anigu waxaan ku silicnay cadaab
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 16, 2020 13: 13 No Comments
Jeceshahay Sysiphes, waa inaan ku riixnaa "dembiga" nolosheena oo dhan anagoo aan weligeen awoodin inaan soo furanno qaladka asalka ah ee waalidkeenna fog, iskaba daa in albaabka jannada loo furo.
Waa xukun daa'im ah, habaar rabbaani ah, oo uu Ilaah shakhsi ahaan ugu sheegay bini aadamka, maxaa yeelay Xaawa aad bay u dooneysay. Sidaa darteed kulligeen waannu dambiile nahay, oo naagtuna waa toban jeer in ka badan hal; maxaa?
Sida laga soo xigtay Saint Paul, Tertullian iyo Saint Augustine, maxaa yeelay ciladdan waxaa loo kala qaadaa jiil ilaa jiilba iyada oo loo marayo isutagga galmada, iyada lafteedu waa kaliya ku celcelin nidaamsan oo ku saabsan dembiga asalka ah. Markaa, xitaa ka hor intaanu dhalan, qof kasta oo bini aadam ah ayaa si toos ah loo cambaareeyay maadaama ay tahay uun midhihii soo noqnoqda ee qaladka.
Oo waxaas oo dhan aawadood abeeso oo isu kala soocaya iibinta Enkarooyinka loo yaqaan 'Universalalisa Encyclopedias' albaab-ilaa-albaab ma ahayn, laakiin geed ilaa geedka. Kumaan kun oo reer falastiiniyiin ah, Kaatoolig, Protestant, iyo falanqeeyayaal muslimiin ah ayaa qoray maydad badan oo sharraxaya oo cilmiyaysan oo "qaladkii asalka ahaa", "dhicitaanka nin", "nimcadii lumay," "qalloocinta naagta ", Etc. Adigoon runtii qancin.
Oo tan aawadeedisagu "dembiga asalka ah" wuxuu ogolaaday tusaale ahaan Saint Paul, fiqiga ugu caansan ee Vatican-ka (gaar ahaan maanta), in la qoro "naagtu waa jir aan madaxa lahayn", iyo in Saint Jerome la dhaho "isxukunka haweenayda waa dambi in lagu kala garto dilkii dhacay". Xitaa inta lagu gudajiray qarnigii XNUMX-aad, sikastaba ha ahaatee iftiin badan, wadaadka Laminais Katooliga wuxuu cadeeyay in "haweeneydu ay tahay taarikh nololeed doqonnimo ah sababta oo ah iyada oo ka dhigaysa hadhaaga xumaha, Eebbe wuxuu ilaaway caqligiisa".
Dhibaatada kaliya ayaa ah raali-gelintan "dembiga asalka ah" ee uu soo rogay Kitaabka Quduuska ah iyo wadaaddadiisa oo dhan waxna kuma salaysna ku dhawaad ​​saddex kun oo sano, malaayiin rag iyo dumarba ah ayaa lagu quudiyay qoraal gebi ahaanba lagu sameeyay, lagu duubay laguna beddelay mid ama in ka badan culimadii Cibraaniga intii u dhaxaysay 1250 iyo 800 BC. JC
Weligii abeeso ma jiri jirin. Weligii weligii qof dumar ah dembi ma lahayn.
Dhanka kale, runtii waxaa jiray been ifafaale mahad leh 'isku dhafan' oo ka mid ah aayadaha laga saaray iyo qoraallo kale. Karraanigii qoray kitaabka Bilowgii wuxuu si fudud u qaatay qoraal Sumerian ah oo cinwaankiisu ahaa Enki iyo Ninhursag, ugu yaraan 1500 sano ka hor dhalashadii Cibraaniga qoraalka, waxna ka beddelay qaab dhismeedkeeda oo dhan si ay ula qabsato wuxuu u baahan yahay sida aad ku ogaan doontaan buuggan.
Taariikh ahaan, beentan waxay aad uga darantahay mabda'a addoonsiga, waxay uga waxtar badan tahay mabda'a sharciga ilaaha iyo ka takhalusida dhammaan bambaanooyinka Atomka ee la isku daro. Markii aan ahaa lix sano jir oo aan kaqaybqaadan jiray casharada katatechism-ka ee ay bixiyeen gabdhaha walaalaha ah ee Dominican, waxaa ii calaamadeeyay dareenkooda si ay nooga sheegaan maska, "Amiirka Beenta".
Waxay na siiyeen qalin midab leh si aan u sawiri karno muuqaalkii Aadan, Xaawa iyo abeesadii oo ku dhex tiil Beer Ceeden. Ku alla kii masiibada hanjabaad ka soo jiidata wuxuu ku guulaystay sanam cibaadada Maanta, waxaan horay u ogahay in buuggan, aan ku heli doonin muuqaal cibaado leh, marka laga reebo akhristayaashayda. "Amiirka Beenta" maahan midka aan ka fikirno iyo kan nooga tusay jahwareerka noocaas ah qarniyo badan (inay naga horjoogsadaan inaan meelo kale raadsanno).
"Amiirka Beenta" waa kan Cibraaniga Cibraaniga ah oo aasaas u dhigay xasuuqii ugu weynaa ee caqli galinta ee Galbeedka asaga oo u dejiyay, iyo waxyaabo kale, haweenku inay mas'uul ka yihiin dhammaan xumaanta jiritaanka aadanaha. Xaawa waligeed cunin tufaaxeed, ama waraysiga ma siin abeeso jirraba. Waligeed nama xukumin. Dhanka kale, qofka na been sheegay, oo dambiga weyn galay, ayaa ah tifaftiraha Beeraha Ceeden, oo ah karraaniga-kaas oo ay khubaradu ugu yeeraan "J" oo isagu gadaal ka dhigay qoraalkii asalka ahaa ee Sumerian si uu ugu diyaariyo qaabkiisa. ka saarista marinnada isaga dhibay.
Laakiin sidee buu kani u yahay J. Miyuu halkaas yimid ?? Ka dib markaan ku dhaafno qoraalka asalka ah ee Sumerian qoraalka Cibraaniga, falanqaynta marinnada laga saaray, iyo isbarbardhiga isbadalada, waxaan ogaan doonaa sababaha dhabta ah ee u horseeday inuu dib u qoro qoraalka oo uu taariikhdiisa beddelo. (iyo waqti isku mid ah Taariikh).
Su’aasha markaa la isweydiin karaa waa sidan soo socota: "Sidee bay u dhacday in qofna weligiis ka hadlin arrintan?" ". Jawaab:
1) Sababtoo ah turjumaaddii ugu horraysay ee kiniiniga asalka ah ee Sumerian ayaa la sameeyay 1915, taas oo ah in la yiraahdo dhexda Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, inta ugu badan ee la dhihi karo waxay ku dhacday guri, et :
2) Sababtoo ah waxay nagu qasbeysaa inaan su'aal ka qabno wax kasta oo nala baray mawduuca bilowga ah. Waxaad qiyaastay wadaad ku dhawaaqaya dhamaadka dadkiisa:
Gacaliyahayga aaminka ah, weligaa dembi hore ma jirin. Waa wax caajis ah, maxaa yeelay waxaan sameeyay toddobo sano oo aan ku baranaayey seminarka "ama imaam ku dhahay Masaajidada" Eves ma dembaabin. Khasab kuguma aha inaad naftaada xijaabdid, ama in si khasab ah laguu guursado ?? Khabiiro ku sugan Sumerian ayaa si fiican u yaqaana qoraalkaan tan iyo markii ay turjunteen bilowgii qarnigii XNUMXaad. Oo kanu waa sirtooda qarsoodiga ah! Waxay ka fiican yihiin meelaynta waxbarasho kale oo kasta, waxay muddo dheer ogaayeen shakhsiyadda iyo ficillada ilaaha Ninhursag qariib ah u eg, farta ku fiiqa, kuwa Rabbiga. Sidoo kale waa fiirsashada Gwendolyn Leick, khabiir Ingiriis ah oo ku xeel dheer suugaanta Sumerian:
“Xiriir aad u weyn ayaa ka dhex jira khabiirka ka shaqeeya shelfisyada iyo bulshada guud. Cadaadiska nololeed ee akadeemiyadeed ee casriga ah ayaa ka dhigaya doorkan dhexdhexaadinta iyo isgaarsiinta xitaa mid aad u adag. Natiijo ahaan, inta badan macluumaadka ifafaalaha mid ka mid ah ilbaxnimada ugu weyn naso ku xaddidan dunida xidhan saynisyahannada iyo qeexitaannada kitaabiga ah ”.
In 1945, weyn cilmi-nafsi Samatar Nuux Kramer Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku tilmaamay cunsuri weyn, in laga yaabo in asal-raacayaasha kitaabiga ah ee Mareykanku adeegsadaan asalkiisa Yuhuudi ah si ay u weeraraan, iyo sidoo kale in rabbaaniyiinta xagjirka ah ee Orthodox-ka ay u caayaan isaga markii ay wax ka weydiinayaan qoraalladooda quduuska ah. (oo loo malaynayo inuu Ilaah shakhsi ahaan ugu yeedhay Muuse). Ma fududa in la helo is rasaaseyn dhexmara laba xoogag iska soo horjeeda oo xoog badan.
Marka, sidii run aan macquul aheyn oo la horumarin karo, waa ay sii hayaan oo ay ka wada hadlaan waqti ka waqti inta u dhaxaysa dadka shirkada fiican iyagoo u jiheysanaya kiniiniga cuneiform ee kale, kaasoo ah kan wax ka sheegaya Daadka. Waa maxay sababta? Sababta oo ah waxay muujineysaa in xaqiiqooyinka Baybalka soo sheegay ay sax yihiin. Bilowgii qarnigii XNUMXaad, jaamacadaha Anglo-Saxon, waxay ahayd dood argagax leh si ay lacag uga helaan carmallada hodanka ah iyo kuwa cibaadada leh. Waax kasta oo cilmi nafsiyeed oo mudan in magaca la arki lahaa hadiyadohooda gaarka ah waa baaba'een haddii ay naftooda ku madadaalin jireen iyagoo muujinaya in qoraalka Cibraaniga ah ee Jannada Ceeden uu ka qiimo yar yahay qorshihii asalka ahaa ee Jannooyinka Tuileries.
Ka dibna si wax looga weydiiyo qoraalka sheekada ee Kitaabka Qudduuska ah, ee Jannada Ceeden, waxay wax walba uga sii gudubtay dhanka tacliinta, bulshada, hal-abuurka diinta, iyadoo aaska loosoo gaabiyo (tacliin) fasalka koowaad. Mowjad malaha. Tani waa sababta aan maanta ugu aragno dhammaan qaamuusyada weedhan si ku filan oo mugdi ku jiro: "Qoraallada Kitaabka Qudduuska ahi waxay leeyihiin isbarbaryaal duugga ah." Ogeysiiska Encarta Encyclopedia, oo maalin kasta ay u aqriyaan boqolaal milyan oo ah caruur iskuulka dhigata iyo ardayda, waa tusaale fiican:
Xisaabta kitaabiga ah ee abuuritaanka Aadan iyo Xaawo waxay ku kala duwanaanaysaa kaliya faahfaahin yar oo ka mid ah khuraafaadka kale ee la midka ah ee qadiimiga Bariga Dhexe iyo meelo kale. Mowduucyo la mid ah ayaa sidoo kale ka muuqda ilaha qadiimiga ah ee Mesopotamian sida Epic of Gilgamesh, laga soo bilaabo 1800 - 1700 BC. JC (...)
Inta badan aqoonyahanada hada jira, si kastaba ha ahaatee, waxay qaataan sheekada Aadan iyo Xaawo waxa ay u egtahay inay tahay: taariikh Cibraaniga ah oo asal u ah bini aadamka oo waxbadan ka wada leh khuraafaadka dadyowga kale ee qadiimka ah, laakiin dhowr astaamood oo kala duwan. Qiimaha diinta ee sheekha ma sinna laakiin waa mid si fudud dib loo qeexay. "Faahfaahinta qaar" oo "kuma yarayn sinaba" Marka aan u maleyno in Golaha Constantinople, hoggaamiyaha kiniisaddu wuxuu u dagaallamayay jidh ahaan goobta comma ee qeexitaanka fudud ee Ruuxa Quduuska ah.
Xusuusnow sidoo kale ma jiro xitaa buug guud oo guud oo loogu talagalay gaar ahaan qoraalka Sumerian ee Beerta Ceeden.
Xaqiiqdii, waxaa jira ku dhawaad ​​soddon falanqeyn (90 sano gudahood, ugu dambeyntiina waa mid aad u yar) Waxaa lagu daabacay joornaallo aad u takhasusay sida joornaalka Journal Near Eastern Daraasadaha, joornaallada cilmiga leh sida kuwa da'da weyn Cuneiform Parallèle ilaa ka Old Axdiga Hore ee Professor Rogers, ama doctorates doctorate-ka casriga ah sida "Kaalinta taariikhiga ah ee Enki iyo Ninhursag aragtida adduunka antediluvianka ah "ama" Enki-Eafalanqaynta diachronicale Qoraallada iyo sawirrada ilaha Sumerian ee ugu horreeya ”, halkaas oo mawduuca annaga ina khuseeya uu weli yar yahay.
Qoraalkan ugu dambeeya ee qormooyinka tusaale ahaan, waxaa difaacay Peter Espak, Beerta Ceeden waa la soo diraa iyada oo aan weligeed ku adkaysanayn suugaanta aan caadiga ahayn ee Kitaabka Qudduuska ah taas oo qoraagu uu si kastaba ha ahaatee marag u yahay. Waa run, aragtidiisa waxaa lagu difaacay Kuliyadda cilmiga fiqiga ee jaamacadda finnishka ee Tartuu. Oo yuu leeyahay cilmiga fiqiga, wuxuu leeyahay dhul jilicsan oo loogu talagalay arday raba inuu helo aragtidiisa. Tacliinta ayaa runtii lagu yaqaanay ka shaqeynta tafaasiisha, iyo cilmiga cilmiga barashada cilmiga barashada cilmiga barashada cilmiga barashada cilmiga barashada cilmiga barashada cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga iyo cilmiga cilmiga barashada cilmiga cilmiga ee cilmiga barashada cilmiga cilmiga bulshada (cheriiology). Iyo macnaha guud ee qoraalka Enki & Ninhursag, qofku wuxuu xitaa la yaabi karaa waa maxay saamaynta faafreebka.
Marka si daacadnimo ah ma u dhihi karnaa in "Diimaha Kitaabka" ugu weyni ay salka ku hayaan wax aan laga bilaabin markii qoraalka saxda ah ee Kitaabka Bilowgii uu yahay been abuur ?? Haa gabi ahaanba (wali waxay qaadataa geesinimo in lagu dhiira geliyo si loo qoro) Tan iyo markii lagu dul dhisay fikirka xadgudubka ee dembiga Xaawa oo ay quduusiinta Bawlos, quduusiinta Augustin, saint Thomas of Acquis iyo kuwa kaleba ku dhisnaayeen qaabkooda iyo dhismahooda caqliga. (Xusuusnow in Injiillada, Masiixu gabi ahaanba waxba kama sheegin Aadan iyo Xaawo cutub kale).
Xitaa maanta, wacdiyeyaasha kaniisadaha wacdinta, sida wadaaddada Katooliga oo dhami, waxay kugu odhanayaan hal cod oo ah inaad naftaada ka badbaadiso qaladka Aadan iyo Xaawo, waa inaad noloshaada gelisaa gacanta Ciise, si in "la maydho" dembigooda. Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, in been abuurkan laga sameeyay Beerta Ceeden uusan su'aal ka keenin buugaagta kale ee Axdiga Hore, iyo xitaa in ka yar qoraallada wacdinta ee New, mlaakiin qarnigii XNUMXaad waxba isma bedelin tan iyo Saint Paul iyo anigu kama hadlayo xitaa Masiixiyiinta aasaasiga ah ee wali adduunka ku jira oo la aasaasay toddobaad iyo Xaawo ka soo baxayo xeebta Adam - xitaa waxay hadda fureen baarkin ee soojiidashada Baybalka ee mawduucaan! Kuwaasi waxay u badan tahay inay cunaan bogagga buuggan.
Rabbaani, dhinaca kale, waxay si la mid ah u aamminsan yihiin fikirka ceebta ah: Ninkii qalloocanaa markii uu ka soo dhacay Eden, kaliya kormeerka dhammaan qaanuunka Yahuudda ayaa u oggolaanaya in la helo shay daahir ah. Tarjun: culayska dembiga asliga ah ayaa “miisaankiisu” maanta u yahay Yuhuudda 3 sano iyo Masiixiyiinta 000. Waa qiimigeeda in lagu bixiyo dhaxalka deynta ruuxiga ah.
Culayska dembiga asliga ah ayaa “culeys” maanta 3 sano u ah Yuhuudda iyo Masiixiyiinta 000. Si kale haddii loo dhigo, daa'in: hadaba muxuu jardiinadan Sumerianku wali wax yar u yaqaan?
Waa hagaag, ka fog mabda'a dembiga iyo dembiga, oo aadan haysan wax dhab ah, khasab ah, waxaa laga yaabaa inaad dhahdo, qabashada dadka raacsan guud ahaan iyo gaar ahaan haweenka. Si kastaba ha noqotee, 5 oo sano ka hor, taasi kama hor istaagin Sumeriyiinta inay dhisaan macbudyo ay ku caabudaan ilaahyadooda. Oo iyagu looma samayn inay damcaan inay wadaaddohoodu garsooraan, sida qoraalka ay ka heleen Beerta Ceeden, midka dhabta ah, Enki & Ninhursag, waxaas oo dhan waxay muujinayaan hal shay oo keliya, in jacaylku uu ka hortagayo dhimashada.
Sumeriansku waxay caabudeen ilaahyadooda maxaa yeelay, sida ay iyagu sheegaan, waxay u abuureen nin inuu noqdo addoomo. Barta. Waxay ka war heleen xoogagga sare iyo gaar ahaan xaqiiqada ah inaysan ugu dambeyntii waxba ahayn mooyee gacanta ilaahyadan, Anunaki. Markaa diiwaangelintaas, si fiican bay u ogaayeen. The WG Lambert oo aad loo yaqaan, oo ah saynisyahan ku xeel dheer arrimaha Rabbiga hortiisa, ayaa sidaas ku tarjumay qoraal cinwaankiisu yahay " Luud Bel Némequi ”iyo Samuel Nuux Kramer gudbiyey "Nin iyo Ilaahiis": Waxa la yaab leh, waxaan ka helnay labada qoraal ee qarniyo badan ka dib Cibraaniyada oo ku sugan kitaabka Ayuub, oo aad looga yaqaan dhammaan wadaaddada maanta, maxaa yeelay aad u macquul ah in loo sharraxo adhiga shaqo la’aanta ah maxaa Ilaah u dayacay. Su’aal kale oo la isweydiin karo: "Haa, markaa waa maxay?" Maxay beddeli doontaa? ".
Jawaab: waxba iyo waqti isku mid ah wax walba! Akhrinta qoraalka dhabta ah ee Beerta Ceeden, waad garwaaqsaneysaa inta "aan been loo beeninay", inta aan dareemaynay dambiile oo aan u been sheegnay waalidkeen, awoowayaashayo, awoowayaashayada, iwm. Taasna, in ka badan 300 oo qarni. Taasi waa dad badan oo bini aadam ah oo noloshoodii ku halleeysay fikirkaan aadka u weyn ee dembiga asalka ah. Qarniyo, soddogyo, naagta la furay, iyo xitaa kuwa dhowaan guursaday waxay ku bixiyeen qiimo nafsi ah fikirkaan nolol xumo ama is dilid.
Buugga cusub ee loo yaqaan 'Chocolate Water' ee shukulaatada ayaa iskood isugu soo uruurin kara riwaayadan shaqsiyadeed, dambiyadaas oo dhan iyo dhibaatooyinkaan oo dhan ee ay gaysatay dembiga Xaawa tan iyo ab ka ab. Qormadan qoysku waxay ka dhacdaa 1830-meeyadii New Mexico, waqti aan sidaa u fogeyn markii dumarku ku noolaan jireen galmada si ceeb ah oo joogto ah, iyo markii ay dadka dhallin-yarada ah u maleeyeen in dhallaanka ku dhashay dhunkasho fudud oo afka ah.
Mid ka mid ah gabdhaha ayaa guursanaya oo yimaada xilligiisa arooska, oo uu diyaariyay wadaadka kaniisadda: aroosadu markaas waxay xidhataa dhar qaro weyn leh oo leh god googoos ah oo heerkeedu u galmooday, si ninkeedu “u dembaabo jidhka” dhammaan sharciyada Masiixiyiinta, laakiin waligiis ma arkin jirkiisa qaawan ee naagta, in, xusuusnow, kitaabka Bilowgii, waxaa lagu qoray mar haddii dembigii la galay, "Adam iyo Xaawa waxay ogaadeen inay qaawan yihiin".
Caawintani iyo galmadaani waxaa loo arkaa inay wasakh yihiin oo ay ceebeeyeen kaniisadu, waxay sameeyeen farxada qirashooyinka qarniyadii iyo qarniyo badan, iyo masiibada dadkii lagu qasbay inay halkaas tagaan. Marka muxuu beddelayaa in la ogaado in qoraalka aasaasay ee Jannada Ceeden uusan mar dambe u qalmin sheqel maxaa yeelay waa shaqaale been abuur?
Hagaag, ka sokow adkaynta suugaanta, diinta iyo fiqi ahaaneed, waxay muujineysaa intee jeer dembigii asalka ahaa ee aan waligii jiri jirin si loogu adeego dadka oo dhan iyadoo si fudud loogu hayo dhabanka ciqaabta rabbaaniga ah.
Karraaniga Cibraaniga wuu ka guulo badnaa Karl Marx - ama, taa beddelkeed, kuwa mas'uulka ka ah holocaust-ka caqliga ayaa ah:
1 ) Culimadda J, ama culimadii iyagu xarigga ka jaray qoraalka Sumerian si ay iyagu u soo bandhigaan, iyo yaa noqon doona a) Saldhigga dhamaan dadka kale lagu dhisi doono, iyo b) Midka kaliya ayaa sharaxay asalka bini-aadamka muddo 1900 sano ah ilaa 60% tirada dadka kunool dunida.
2 ) Saints Paul oo isticmaali doona J. Waraaqihiisa iyo waraaqihiisa si loogu faafiyo magaca Masiix sharafdarro ku timaadda jidhka iyo adeegsiga haweenka (Masiixu weligiis ma odhan wax sidan oo kale ah).
3 ) Tertullian, "aabayaasha kiniisadda" kuwaas oo u adeegsan doona qoraallada Saint Paul inay cambaareeyaan dib u guursashada (waajibka is-caayin) iskuna day inaad haweenka ku qasabto inay xirtaan xijaab.
4 ) Saints Augustine, oo sharxi doona in dembigii hore uu yahay ku-celcelin nidaamsan oo ku saabsan ciladdii ugu horreysay, taas oo qaawin doonta dambiga qaawan oo cambaareyneysa falka jidhka. Weedhiisa caanka ah ee ragga keliya: "Ayaa qof dumar ah oo Ilaah ka jeedsata" wax badan ayaa sheegaya, oo macnaheedu yahay in naagta, wax aan matalin Ilaah u tahay tan iyo iyada la qabo nin ama iyada la'aan, waa, kiis kasta, lama saadaalin karo. Dadkaas oo dhan wanaag, dumarka waa sheydaanka laftiisa.
5 ) Wadaaddada (diimaha oo dhan waa la isku daray) Ayaa xoojin doona diidmada qaawan, galmada iyo dumarka, asagoo usbuuc walba sameysanaya akhrinaya in Eebbe sameeyo, oo laga soo qaatay qoraalladii misogynist ee Saint Paul, iyo tan, in kabadan 1400 sano.
Wali way ka wanaagsan tahay in la guursado intii la guurin lahaa, Bawlos wuxuu ku yidhi Waraaq uu u qoray Korintos, isagoo mar labaad caddeeyay in guursashada ay ka yar tahay gubashada cadaabta. Hadana sida laga soo xigtay Saint Jerome, Ilaah wuxuu cambaareeyay guurkaan xitaa marka ninku jacayl la galo xaaskiisa ( haddii, haddii ) : "Ma jiro wax ka caansan oo ka badan ninka jecel afadiisa sida boqoradda oo kale: wuu galaa dembiga sinada ”.
Kufilan in la yiraahdo guurka kaliya ee waligiis raali ka noqday indhaha wadaadkan katooliga ah ee qaba anshaxnimadiisa ayaa ah "guurka cad", kaas oo lagu qandaraasyo kaliya baahiyada dhalmada, markasta dembiga Eve . Waana ku filan in la dhegeysto khudbadihii baadariyihii ugu dambeeyay si loo ogaado in aan waxba is beddelin. Allaha u naxariistee Benedict XVI awood uma laha awooddii kuwii ka horreeyay, laakiin waa haddii uu awoodi karo. Kufilan in la yiraahdo guurka kaliya ee waligiis raali ka noqday indhaha wadaadkan katooliga ah ee qaba anshaxnimadiisa ayaa ah "guurka cad", kaas oo lagu qandaraasyo kaliya baahiyada dhalmada, markasta dembiga Eve .
Sidaa darteed, Jannadii Ceeden darteed, qofna xaq uma lahayn in uu jacayl sameeyo Arbacada, Jimcaha iyo Axadda waqtiyada caadiga ah, iyo xitaa in ka yar inta lagu jiro 40ka maalmood ka hor Bentakostiga, Istaad-ka ka dib Kirismaskii iyo 10-kii. maalmo iyaga ka dambeeya iyo ciidaha bikrada ka dib, nooca ugu sareeya ee ay siiyeen haweenku wadaaddada qaar ka mid ah ciidaha qoduuska ah iyo gaar ahaan 180 maalmood dhalmada ka hor iyo 40 maalmood ka dib. Looma baahna in la sheego, Kaniisadda ayaa sidoo kale nidaamisay mowqifka lamaanaha iyo waxa "farsamo ahaan ku sameyn karaan sariir." Furiinka, xitaa ha ka hadlin.
Qoraalka hoggaaminta ee Yahuudda iyo Christian-ku wuxuu hoos u dhacay 2000 sano.
Waxaan hadda sifiican u fahamsanahay muhimadda ay leedahay ogaanshaha in dembiga Jannada Ceeden weligeed ma jirin. Wuxuu si fudud u adeegsaday wadaaddada si looga hortago raggii ay isku duubnayd inay noloshooda ku noolaadaan. Waxaa iska hoogay ilmaha aan weli dhalan ee dhintay. "Naftiisu waxay toos ugu dhacday cadaabta," ayay yiraahdeen, iyagoo waalidiinta ka dhaadhiciya inay iyaguna ku wanaagsan yihiin cadaabta weligeed ah. Markii loo eego Henry IV, xitaa waxay galeen halista saarta.
Qarnigii XNUMX, wadaaddadii iyo dhakhaatiirtu way diideen inay faafiyaan habab cusub oo dhalmo ah sababta oo ah kitaabkii Bilowgii wuxuu yidhi haweenku "waa inay ku dhalaan xanuun". Bartamihii qarnigii XX, Vatican-ka ayaa ka soo horjeedsatay kala-qaadidda kiniinka, maxaa yeelay waxay u oggolaatay inay "dembaabo" Iyo imisa caruur ah ayaa la diley ama laga tegay maxaa yeelay hooyadu ma dooneyn inay noqoto hooyo keli ah, taasoo la micno ah "Waxaan ahay dhillo, waxaan seexday aniga oo aan guursan", iyo tan, ilaa iyo toddobaatanaadkii? ?
Immisa guur oo aan faraxsaneyn ayaa sabab u ah qaan-gaarka dambiga ??
Aabihii qarnigii XNUMX-aad qoraaga Faransiiska ayaa weligiis mala-awaalay "ku noolaanshaha dembiga" maxaa yeelay, wuxuu guursaday, wuxuu ku jeclaaday naag xaalad liidata (Addoonkiisa). Noloshiisu waxay ahayd oo keliya taxanaha dheer oo xanuun badan ee dambiga bulshada, laga horjoogsaday inuu si buuxda ugu noolaado farxadiisa.
Ugudambeyn, waa isbadal taxanaha TV-ga New York Sex in ka dareenka in sida ugu wanaagsan loo soo koobo xaaladda. Iyada oo ay weheliyaan saaxiibkeed Miranda, saxafiga ayaa aada kaniisadda Episcopalian ee ku taal New York. Markuu arkay dhinac taagan dheelitirka aaminka, Miranda dhegtiisa ayuu ka shaaheysanayaa: "Catholics, Episcopalians, gadhxiyeyaal, Quaker, waa isku mid, diimahaas oo dhan waxaa loo sameeyay inay dabiyaan nolosha galmada". Waxay hadda ka go'day Kaniisad sababtoo ah jacayl ka dib, wuxuu si nidaamsan ugu degay qubays si uu uga maydho dembigii uu galay. Si fiican uma aysan jeedin.
Waxaa jira kaliya seddex kaniini oo qoraalka Enki & Ninhursag. Iyagu waa 4 sano jir. Intii lagu gudajiray wareysiga, Professor Attiger, oo ku takhasusay cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Bern isla markaana ku taqasusay qoraalka qoraalka, ayaa noo sheegay in haddii “kiniiniyadan asalka ahi ay taariikhdu ku beegan tahay ku dhawaad ​​1800 BC, in qoraalka la xalliyay inta u dhexeysa 2100 iyo 2000 BC ”. Sidaa darteed looma reebi karo in kiniiniyada kale ee duugga ah ee wali dhulka hoostiisa ku seexdaan ama madxafyada waaweyn ee cilmiga maskaxda in (Ku socota buugga) waxaa qoray Eric Baroque.
Markuu ninku jacayl la leeyahay xaaskiisa ( haddii, haddii ) : "Ma jiro wax ka caansan oo ka badan ninka jecel afadiisa sida boqoradda oo kale: wuu galaa dembiga sinada ”.
L'a screed Yuudas-Christian hoggaaminta ayaa hoos u dhacay 2000 sano.
Waxaan hadda sifiican u fahamsanahay muhimadda ay leedahay ogaanshaha in dembiga Jannada Ceeden weligeed ma jirin.
Wuxuu si fudud u adeegsaday wadaaddada si looga hortago raggii ay isku duubnayd inay noloshooda ku noolaadaan. Waxaa iska hoogay ilmaha aan weli dhalan ee dhintay. "Naftiisu waxay toos ugu dhacday cadaabta," ayay yiraahdeen, iyagoo waalidiinta ka dhaadhiciya inay iyaguna ku wanaagsan yihiin cadaabta weligeed ah. Markii loo eego Henry IV, xitaa waxay galeen halista saarta.
Aabihii qarnigii XNUMX-aad qoraaga Faransiiska ayaa weligiis mala-awaalay "ku noolaanshaha dembiga" maxaa yeelay, wuxuu guursaday, wuxuu ku jeclaaday naag xaalad liidata (Addoonkiisa). Noloshiisu waxay ahayd oo keliya taxanaha dheer oo xanuun badan ee dambiga bulshada, laga horjoogsaday inuu si buuxda ugu noolaado farxadiisa. Ugudambeyn, waa isbadal taxanaha TV-ga New York Sex in ka dareenka in sida ugu wanaagsan loo soo koobo xaaladda. Iyada oo ay weheliyaan saaxiibkeed Miranda, saxafiga ayaa aada kaniisadda Episcopalian ee ku taal New York.
Markuu arkay dhinac taagan dheelitirka aaminka, Miranda dhegtiisa ayuu ka shaaheysanayaa: "Catholics, Episcopalians, gadhxiyeyaal, Quaker, waa isku mid, diimahaas oo dhan waxaa loo sameeyay inay dabiyaan nolosha galmada".
Waxay hadda ka go'day masiibo maxaa yeelay jacayl kadib, wuxuu si nidaamsan ugu degay qubays si uu uga maydho dembigii uu galay. Si fiican uma aysan jeedin. Waxaa jira kaliya seddex kaniini oo qoraalka Enki & Ninhursag. Iyagu waa 4 sano jir. Intii lagu gudajiray wareysiga, Professor Attiger, oo ku takhasusay cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Bern isla markaana ku taqasusay qoraalka qoraalka, ayaa noo sheegay in haddii “kiniiniyadan asalka ahi ay taariikhdu ku beegan tahay ku dhawaad ​​1800 BC, in qoraalka la xalliyay inta u dhexeysa 2100 iyo 2000 BC ”.
Sidaa darteed looma reebi karo in kiniiniyada kale ee da'da ah ee wali dhulka hoostiisa ku seexda ama madxafyada waaweyn ee cilmiga maskaxda in (Ku socota buugga)
Coronavirus: Muuqaal aad u fiican oo uu qoray Raffaële Morelli, dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ee Talyaani iyo cilmu-nafsi-yaqaan "Waxaan rumeysanahay in cosmos-ka qaabkiisa is-waafajinta waxyaabaha iyo sharciyadiisa, markii ay noqdaan kuwa aad uga xumaada"